Namibia manokatra indray ny mpizahatany iraisam-pirenena
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia Namibia » Namibia manokatra indray ny mpizahatany iraisam-pirenena
Nanomboka tamin'ny 01 septambra 2020, dia nosokafan'i Namibia indray ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Hosea ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena. Ity dia tetik'asa kendrena ho an'ireo mpandeha miala sasatra ary hojerena isaky ny tapa-bolana ary hasiam-panovana arak'izay ilaina.
Ny mpitsidika rehetra dia tsy maintsy manaraka ny lalàna momba ny fiarovana sy ny fahasalamana ankehitriny Covid-19
State of the Emergency. Ny lalàna dia azo alaina ao amin'ny www.namibiatourism.com.na.
'Fonenana ”dia midika ho fotodrafitrasa fijanonana mandritra ny alina sy serivisy mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny fotodrafitrasa omena amin'ny toerana rehetra ahafahana mitoby amin'ny karajia, tranolay na fitaovana mitovy amin'izany.
"Fananganana trano honenana" dia midika hoe trano sy trano anaovana asa fivelomana miaraka na tsy misy sakafo mifanohitra amin'ny fandoavana vola amin'ny mpizahatany.
'' mpizahatany “dia midika hoe izay olona rehetra mankamin'ny toerana lavitra ny toerana onenany mahazatra mba hialana voly na hananana asa.
"Indostrian'ny fizahantany" dia midika hoe ny orinasa, orinasa ary hetsika izay manome serivisy sy fotodrafitrasa ary mikarakara, manintona ary mahafeno ny filan'ny mpizahatany iraisam-pirenena sy anatiny.
Ny fidirana ao amin'ny firenena dia avela amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Iraisampirin'i Hosea Kutako manomboka amin'ny 01 septambra 2020.
Ny fahatongavan'ireo mpizahatany rehetra dia tsy maintsy manana valiny PCR ratsy tsy mihoatra ny 72 ora alohan'ny hidirany avela hiditra amin'ny faritanin'i Namibianina.
Ireo mpizahatany dia tsy maintsy mameno ny valin'ny fangatahana epidemiolojika mba hatolotra miaraka amin'ny zotram-pitsangatsanganana feno ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny taratasy dia azo alaina ao amin'ny www.namibiatourism.com.na.
Ireo mpizahatany dia tsy maintsy manana fiantohana fitsangantsanganana izay manarona fikarakarana ara-pahasalamana na fijanonana trano fandraisam-bahiny tsy ampoizina
Fepetra takiana ho an'ireo mpanome tolotra indostrialy fizahantany eo an-toerana
Ny toeram-pizahantany sy ny fandraisam-bahiny fandraisam-bahiny, ny fotodrafitrasa ary ny orinasa rehetra dia tokony hanaraka ny masonkarena ankapobeny momba ny fahasalamana sy fiarovana araky ny voalazan'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny asa sosialy (MoHSS).
Mba hiantohana ny traikefa azo antoka ho an'ireo mpizahatany, ny protokolan'ny Covid-19 amin'ny antsipirihany ho an'ny asa rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia napetraky ny mpandrindra ny fizahan-tany any Namibia ary azo raisina ao www.namibiatourism.com.na.
Ny toeram-pizahantany sy ny fandraisam-bahiny, ny fotodrafitrasa ary ny orinasa dia tsy maintsy alohan'ny handraisana ireo vahiny fahazoan-dàlana / fahazoan-dàlana ho fanamarinana ara-pahasalamana mifanaraka amin'ny fanomezana ireo masontsivana ho an'ny fandraisana andraikitra fifohazana amin'ny fizahantany iraisam-pirenena. Ny taratasy fangatahana dia azo alaina ao amin'ny www.namibiatourism.com.na.
Tokony hosoratana anarana ary manana fahazoan-dàlana miasa na Birao fizahan-tany any Namibia (NTB).
Tsy misy fotodrafitrasa hafa ankoatry ny birao fizahan-tany fizahan-tany any Namibia izay manana trano fisoratana anarana voasoratra anarana no avela na horaisina ho mari-pankasitrahana ho fitokanana ireo mpizahatany / mpitsangatsangana amin'ity asa ity. Ny tsy fanarahana ity fepetra ity dia miteraka fandikan-dalàna ary azo saziana mifanaraka amin'ny lalàna napetraka eo ambanin'ny State of Emergency.
Ny toeram-ponenana fizahan-tany rehetra sy fotodrafitrasa ampiasaina amin'ny asa fizahan-tany dia tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka ireto:
Mizara sy manentana ireo torolàlana momba ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny vahiny sy mpiasa / mpiasa; manome fiofanana ho an'ny mpiasa amin'ny fomba fika momba ny fahasalamana sy fiarovana mba hisorohana, hitantanana ary hanalefahana ny fiparitahan'ny COVID-19; manome torolàlana sy fomba fiasa ho an'ny mpiasa eo aloha sy ny birao izay mampiroborobo ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana hisorohana ny fiparitahan'ny COVID- 19; manome fitaovana sy fiarovana ho an'ny mpiasa sy ny vahiny; fanadiovana; hampihatra ny fampiasana fitaovam-piarovana, ny fepetra takiana amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina ary ny fanarahan-dia:
mahazo sy mizara amin'ny MoHSS, izay misy ny filazan'ny mpitsidika / vahiny ny tantaram-pitetezana sy ny toetoetran'ny fitsaboana; ary miara-miasa amin'ny mpanara-maso sy ny governemanta nasionaly mba hiantohana ny fitantanana anatiny sy sisin-tany mahomby ho an'ny vahiny mifanaraka amin'ny kavina eo an-toerana sy iraisam-pirenena.
Fepetra takiana amin'ny seranam-piaramanidina
Ny zotram-piaramanidina dia tokony hanaraka ny fenitra fiaramanidina iraisampirenena araka ny voatondro avy amin'ny IATA (International Air Traffic Association) fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana 19.
Ny kaompaniam-pitaterana dia tsy maintsy miantoka fa ireo mpandeha mankao Namibia dia manana fitsapana PCR manan-kery navoakan'ny foibem-panadinana nahazo mari-pahaizana any amin'ny firenena niavian'ny dia.
Tokony ho azo antoka fa ny mpandeha rehetra dia manana valin'ny fitsapana PCR izay tsy mihoatra ny 72 ora. Ireo mpandeha manana fitsapana IPCR mihoatra ny 72 ora na tsy misy fitsapana dia haverina amin'ny vidin'ny zotram-piaramanidina.
Ireo mpandeha dia tsy maintsy atao scanner sy namboarina hijerena maripana alohan'ny hiakarany sy ireo manana mari-pana mihoatra ny 38 oc dia tsy maintsy mandalo tombana sy fanandramana ilaina amin'ny Covid19 alohan'ny hamelana azy ireo hiditra.
Fitsapana / fitiliana amin'ny fahatongavany
Ireo mpandeha iraisampirenena rehetra tonga ao Namibia dia hanao fizahana mari-pana.
Ireo mpandeha simptika manana hafanan'ny vatana mitovy amin'ny 38 na mihoatra o c dia hosedraina amin'ny Covid-19 ao amin'ny seranam-piaramanidina. Ho fanampin'ity haavon'ny maripana ity, raha mikohaka ny mpandeha iray, sempotra ny fofony, sahirana miaina, marary tenda ary marary aretin'andoha - izy ireo dia hitokantokana amin'ny toerana manokana natolotry ny MoHSS mandra-pahavonona ny valiny.
Mpandeha izay manome PCR manan-kery sy ratsy eo amin'ny fahatongavany amin'ny fanarahana ny fepetra takiana amin'ny fidirana dia havela hiroso amin'ny toeram-pizahantany manana mari-pankasitrahana famandrihana mandritra ny 7 andro mitokana.
Mifindra avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny toeram-ponenana mpizahatany
Ireo mpizahatany dia tokony hifindra avy any amin'ny seranam-piaramanidina mivantana mankany amin'ny toerana famandrihana voalohany.
Tsy avela mandritra ny alina na fijanonana amin'ny trano / fotodrafitrasa tsy voamarina amin'ny fahasalamana.
Ny mpitsangatsangana rehetra dia tsy maintsy mijanona mandritra ny 7 andro ao amin'ny toeram-pizahan-tany voalohany na toeram-ponenan'izy ireo izay tsy maintsy voasoratra ara-dalàna amin'ny NTB ary voamarin'ny MoHSS.
Ny mpitsangatsangana rehetra izay niditra tao Namibia dia hosedraina ho an'ny Covid -19 amin'ny andro 5 andro fitokanana ao amin'ny toerana fizahan-tany voalohany nitoerany. Ny valin'ny fitsapana dia homena amin'ny andro faha-7 aorian'izay dia avela hanohy ny lalan-kaleha ny mpizahatany raha ratsy ny vokatra. Raha tsara ny vokatra dia hoentina mitokana ny fizahantany.
Ny fitsapana dia hataon'ny mpanome tolotra ara-pahasalamana ao amin'ny toeram-pizahantany.
Ireo mpizahatany dia afaka mandray sy mankafy ny vokatra sy ny fizahan-tany rehetra atolotry ny toeram-ponenany ary mety tsy hiala amin'ilay toerana raha tsy aorian'ny 7th andro.
Ireo mpitsangatsangana miditra ao amin'ny firenena dia tokony hahafantatra ny loza mety hitranga amin'ny covid-19 ary tokony hanaraka ny fepetra fitiliana fanampiny napetraka isaky ny toerana fitsidihana.
Ny fanitsakitsahana ireo kaonty fitokana-monina 7 andro dia heloka azo saziana mifanaraka amin'ny lalàna napetraka eo ambanin'ny State of the Emergency.
Famakiana sy fitantanana tranga
Mba hiarovana ny fahasalaman'ny mpizahatany sy ny asany ara-potoana raha sendra ny Covid-19 dia voatery, tsy maintsy mahazo laharana finday eo an-toerana ny mpizahatany ary azo tratrarina amin'ny fotoana rehetra, raha ao Namibia.
Ny mpitsangatsangana iray izay vokatry ny fitsapana taorian'ny 7 andro dia mivoaka tsara dia hafindra any amin'ny toeram-pivarotana mitokana ho an'ny governemanta ho an'ny fitsaboana amin'ny vidiny manokana ary ho tantanana araka ny Tondrozotra Nasionaly momba ny fitantanana tranga.
Fepetra takiana amin'ny visa
Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy manaraka ny fepetra takiana amin'ny visa izay mihatra amin'ny fireneny.
Ireo mpitsangatsangana avy any amin'ireo firenena tsy voaroaka amin'ny visa dia afaka mijanona hatramin'ny 90 andro be indrindra any Namibia.
Raha mihoatra ny fotoana maha-ara-dalàna ny fahazoan-dàlana na fahazoan-dàlana ianao dia azo samborina, voasambotra ary mandoa onitra alohan'ny sesitany.
Ny mpitsangatsangana koa dia afaka mangataka visa any amin'ny masoivoho Namibianina / Komisiona avo manerantany.
Ny pasipaoro dia tokony ho ara-dalàna mandritra ny fe-potoana farafahakeliny 6 volana manomboka amin'ny andro fampiharana visa.
Nosedive ny fialan-tsasatry Hawaii tamin'ny volana Jolay
Florida Keys dia mandositra ny fiantraikany lehibe avy amin'i Laura